အောက်တိုဘာလ ၁၃ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်မယ့် ကမ်ပိန်း အတွက် ပါဝင်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် 🙏 - News MM
အောက်တိုဘာလ ၁၃ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်မယ့် ကမ်ပိန်း အတွက် ပါဝင်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် 🙏
မြန်မာပြည်ဟာ သဘာဝဘေး ကပ်ရောဂါဘေးတွေ သာမက စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ လူကြောင့် ဖြစ်တဲ့ဘေးဒဏ်ကိုပါ ဆိုးဆိုးရွားရွား ခံစားနေကြရပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် စစ်ဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့ မြန်မာပြည်အနှံ့က တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေနဲ့ တစ်သားတည်းအတူ ခံစားနေရကြောင်း နဲ့ အာဏာရှင်စနစ် ချုပ်ငြိမ်းဖို့၊
ဘေးသင့်ပြည်သူတွေကို ကူညီစောင့်ရှာက်ဖို့အတွက် ပြည်သူအားလုံးက အတူကြိုးစားနေကြောင်း ပြဖို့ ကမ်ပိန်းတစ်ခုကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ် ထိခိုက်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေလျှော့ချရေးနေ့ ဖြစ်တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၁၃ရက်နေ့မှာ လုပ်ချင်ပါတယ်။
ပြီးရင် လူသားချင်း စာနာမှု ကို ပြသတဲ့ အဓိပ္ပါယ် နဲ့ ညာဘက်လက်ကို ဘယ်ဘက် နှလုံးသားပေါ် တင်၊ တော်လှန်ရေး သင်္ကေတ လက်၃ချောင်းထောင် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ မျှဝေရင်း ဒီ ကမ်ပိန်းမှာ ပါဝင်ပေးနိုင်ပါတယ်
ကိုယ့်ရဲ့ တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံက ကိုယ်စားပြုလူမျိုးက ဘာလဲ၊ အဲဒီဒေသတွေမှာ ရှိတဲ့ စစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူတွေနဲ့ အတူတကွ ရှိနေပြီး စာနာထောက်ထား အားပေး ကူညီတာတွေ လုပ်နေပါတယ်
နှစ်သက်ရာ caption နဲ့#OnlyTogether
#DRRDay2021Myanmar#StopManmadeDisasterinMyanmar ဆိုတဲ့ hashtag စာသားလေးတွေကို တွဲတင်ပေးပြီး ဒီကမ်းပိန်းမှာ အားလုံး ပါဝင်ပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်Only together, Can we save the planet!Only together, Can we win the democracy!
မွနျမာပွညျဟာ သဘာဝဘေး ကပျရောဂါဘေးတှေ သာမက စဈအာဏာသိမျးမှုကွောငျ့ ဖွဈလာတဲ့ လူကွောငျ့ ဖွဈတဲ့ဘေးဒဏျကိုပါ ဆိုးဆိုးရှားရှား ခံစားနကွေရပါတယျ။
အဲဒါကွောငျ့ စဈဘေးဒဏျခံစားနရေတဲ့ မွနျမာပွညျအနှံ့က တိုငျးရငျးသားပွညျသူတှနေဲ့ တဈသားတညျးအတူ ခံစားနရေကွောငျး နဲ့ အာဏာရှငျစနဈ ခြုပျငွိမျးဖို့၊
ဘေးသငျ့ပွညျသူတှကေို ကူညီစောငျ့ရှာကျဖို့အတှကျ ပွညျသူအားလုံးက အတူကွိုးစားနကွေောငျး ပွဖို့ ကမျပိနျးတဈခုကို အပွညျပွညျဆိုငျရာ ဘေးအန်တရာယျ ထိခိုကျဆုံးရှုံးနိုငျခွလြှေော့ခရြေးနေ့ ဖွဈတဲ့ အောကျတိုဘာလ ၁၃ရကျနေ့မှာ လုပျခငြျပါတယျ။
ပွီးရငျ လူသားခငြျး စာနာမှု ကို ပွသတဲ့ အဓိပ်ပါယျ နဲ့ ညာဘကျလကျကို ဘယျဘကျ နှလုံးသားပေါျ တငျ၊ တောျလှနျရေး သငျ်ကတေ လကျ၃ခြောငျးထောငျ ဓာတျပုံရိုကျပွီး ကိုယျ့ရဲ့ ဆိုရှယျမီဒီယာတှမှော မြှဝရေငျး ဒီ ကမျပိနျးမှာ ပါဝငျပေးနိုငျပါတယျ
ကိုယျ့ရဲ့ တိုငျးရငျးသားဝတျစုံက ကိုယျစားပွုလူမြိုးက ဘာလဲ၊ အဲဒီဒသေတှမှော ရှိတဲ့ စဈဘေးရှောငျ ပွညျသူတှနေဲ့ အတူတကှ ရှိနပွေီး စာနာထောကျထား အားပေး ကူညီတာတှေ လုပျနပေါတယျ
နှဈသကျရာ caption နဲ့#OnlyTogether
#DRRDay2021Myanmar#StopManmadeDisasterinMyanmar ဆိုတဲ့ hashtag စာသားလေးတှကေို တှဲတငျပေးပွီး ဒီကမျးပိနျးမှာ အားလုံး ပါဝငျပေးကွဖို့ တိုကျတှနျးပါတယျOnly together, Can we save the planet!Only together, Can we win the democracy!
Previous Article ချစ်ရတဲ့ သားသမီးတွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင် ကြည်နူးစရာ အချိန်လေးတွေကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ ချစ်စရာလေးတွေ ပျော်နေကြတာ 🥰
Next Article ၀ရမ်းပြေးနေရတဲ့ သရုပ်ဆောင်အလင်းရောင်အတွက် အားဆေးတစ်ခွက်